नेपाल निर्वाचन २०७४ - प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा | LIVE UPDATE | RESULTS - मतदातामा किन देखिएन चुनावी उत्साह?
मतदातामा किन देखिएन चुनावी उत्साह?
केशर रोका | सोमबार, ११ मङि्सर २०७४
माण्डवी गाउँपालिकाको रम्दीका मतदातासँग भोट माग्दै कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार प्रा.डा.गोविन्दराज पोख्रेल।
प्यूठान : स्थानीय तह निर्वाचनमा टोलटोलमा उम्मेदवार थिए। एउटै घरका बाबुछोरा, दाजुभाई समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। झण्डै दुई दशकपछि चुनाव भएकाले मतदाताहरूमा बेग्लै उत्साह देखिथ्यो। तर, यसपालीको निर्वाचनमा त्यस्तो देखिँदैन। पहिलो चरणमा आइतबार भएको निर्वाचनमा खसेको मतले त्यसको संकेत गर्छ।
दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। डेढ सातामात्र बाँकी समय हुँदा समेत मतदाताहरूमा उत्साह पाइँदैन। चुनावी प्रचारप्रसारलाई भन्दा मतदाताहरुले आफ्नै व्यक्तिगत कामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कार्यकर्ताको उत्साह बिना नै नेता एवं उम्मेदवार चुनावी प्रचारप्रचासारमा गाउँ गाउँमा पुगेका छन्।
चुनावी तालमेलले गर्दा आफू आवद्ध पार्टीबाट उम्मेदवार नहुनु, पार्टीको चुनाव चिन्ह बिना नै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र आउनु, उम्मेदवारहरूले पुरानै विकासका मुद्दा लिएर गाउँ पुग्नु लगायत कारणले गर्दा मतदाताहरूमा उत्साह घट्दै गएको धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘स्थानीय तहमा घरैपिच्छे सवैलाई चुनाव लागेको थियो’,स्वर्गद्वारी नगरपालिका–६ देउरालीका स्थानीय भेग बहादुर महराले भने,‘यसपाली त्यस्तो छैन। भोट माग्न उम्मेदवारहरू गाउँमा त्यति आएका छैनन्।’ स्थानीय निर्वाचनमा सवैको घरघरमा पार्टीका झण्डा, चुनावी, सभा, कार्यकर्ता भेला लगाएतका कार्यक्रमहरुले तिव्रता पाएको उनले बताए। छिमेकी जिल्ला रोल्पाको सुवर्णवती गाउँपालिका अफलेपोखरासँगै जोडिएको उक्त गाउँमा दुवै जिल्लाका नेता, कार्यकर्ताहरु फाट्टफुट्ट मात्र चुनाव प्रचार प्रसार गर्न आएको उनले जानकारी गराए।
वाम पार्टीहरू एक ठाउँमा भएपछि चुनावी प्रचारप्रसार विगतको जस्तो नदेखिएको विजुवार जुम्रिबजारका व्यवसायी लोक बहादुर बस्नेत बताउँछन्। ‘जिल्लाका तीन ठूला शक्ति एक ठाउँमा छन्’,उनले भने,‘वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसलाई यत्तिकै पनि जित्छौँ भन्ने खालको मनोवल देखिन्छ। एकल प्रतिस्पर्धा भएको भए मात्र चुनावी प्रचारत्मक अभियान तीव्र हुनसक्थे।’ चुनाव जित्न र सत्तामा जानकै लागि पार्टीहरू एक ठाउँमा हुनु स्वार्थपूर्ण राजनीति भएको विचार राख्दै उनले भने,‘मुलुकका लागि धेरै पार्टीको आवश्यकता छैन। साँच्चिकै चोखो मनले पार्टीहरू धुव्रीकरण भएका हुन् भने राम्रो छ। तर, जनतालाई छलकपट गर्नु हुँदैन्।’ विगतका निर्वाचनमा जित्नकै लागि तालमेल गर्ने संस्कार बस्दै आएको समेत उनले सुनाए।
वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बाहेकका शक्तिहरूले पनि जिल्लामा चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र सहित जिल्लामा ९ वटा पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यसपाली आचार संहिताले समेत कडाई गरेकाले जनस्तरमा चुनावको माहोल नतातेको पाइएको हो। पार्टी निकटका टिसर्ट, ज्याकेट लगाउने, मोटरसाइकल र्‍याली र माइकिङ गर्ने काम यसपाली भएका छैनन्। निर्वाचन आचार संहिताले उक्त काम पूर्णरुपमा बन्देज गरेको छ। बाम गठवन्धनका कारण जिल्लामा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार नै बनेका छैनन्। प्रतिनिधीसभा सदस्यमा राजमो, प्रदेश सभाका लागि क्षेत्र नम्बर १ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्रका मात्र उम्मेदवार उठेका छन्। आफ्नो उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा मतपत्रमा पार्टीको चुनाव चिह्न नै समावेश भएको छैन। प्रदेश सभाका लागि जिल्लाका दुवै क्षेत्रमा राजमोका उम्मेदवार छैनन्।
स्थानीय तहको मतपरिणामका आधारमा वाम गठबन्धन बलियो देखिएपनि कतिपयले लोकतान्त्रिक शक्तिको समेत विजयको सम्भावना औंल्याएका छन्। पार्टीको नेतृत्व तहमा भएको गठबन्धनको सन्देश आम मतदाताहरूमाझ प्रभावकारी रुपमा नपुग्दा चुनावी नतिजाको परिणाम यसै भन्न नसकिने कतिपयले तर्क गर्छन्। कार्यकर्ताहरूमा वर्षौदेखिको राजनीतिक बैमनश्यता अझै नहटेको मतदाताहरू सुनाउँछन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा वाम गठबन्धन ३८ हजार ५३ मतले अगाडि देखिन्छ। लोकतान्त्रिकले २६ हजार दुई सय ८२ र वाम गठबन्धनले ६४ हजार तीन सय ३५ मत लिएका छन्। जिल्लामा कुल एक लाख ३८ हजार ६ सय ४१ जना मतदाता छन्। क्षेत्र नम्बर १ मा ६४ हजार ६ सय ६८ र २ मा ७३ हजार ९ सय ७३ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्यूठानले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकारी कृष्ण बहादुर कुवँरका अनुसार स्थानीय तहको भन्दा यसपाली ११ हजार नौ सय ९४ जना मतदाता थपिएका छन्। उनका अनुसार जिल्लाभर दुई सय मतदान केन्द्र र एक सय ५१ मतदानस्थल कायम गरिएको छ।